Posts by Admin | Kalshaale News - Page 8
Ugaas Faarax Dheere Iyo Garaad Abshir Saalax Oo kamid ahaa Isimadda Puntland Ee kulanka kula yeeshay Garoowe Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamoud
K.news: Magaalada Garowe ee Caasimada Puntland ayaa waxaa saacidihii ugu dambeeyay ka socday kulamo gooni gooni ah oo ay wada qaadanayeen Madaxweynaha Dawlada Federaalka,Madaxweynaha Puntland iyo Isimada. Madaxweynaha Dawlada Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ‘’Gaas’’ iyo Madaxweynaha Dawlada Federaalka Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud ayaa xalay wada qaatay kulan laba geesood ah oo ay Al-baabadu u xirnaayeen. Warsidaha Puntlandi ayaa ogaaday in Madaxda Puntland iyo Federaalka ay ka wada hadleen Hirgalinta Barnaamijka Hiigsiga 2016-ka iyo heshiisyadii a horay u wada gaareen Dawladaha Puntland iyo Federaalka sida ay noo xaqiijiyen Ilo Xog ogaal ah oo aad ugu dhowaa kulanka. Lama yaqaan in Labada Madaweyne ay kulankooda kuso hadal qaadeen Maamulka loo dhisayo Gobolka Galgaduud iyo Galmudug,xilli Hogaanka dhaqanka iyo Siyaasiyiinta Puntland ay si wayn u dhaliileen Siyaasadda Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud.
Xassan Sheekh oo la kulmay Isimada.
Madaxweynaha Dawlada Federaalka Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud ayaa sido kale shir Al-baabadu ay u xiran yihiin la qaatay Isimada Puntland,waxaana shirka goob joog ka ahaa Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ‘’Gaas’’. Warar Horu-dhac ah oo uu helay Warsidaha Puntlandi ayaa sheegaya in Hogaanka dhaqanka ay Madaxweyne Xassan Sheekh ka dalbadeen inuu dalka ku hogaamiyo Cadaalad,uuna ku dhaqmo Dastuurka dalka,si loo gaaro Himilada umada Soomaaliyeed ay ku doonayaan. Wali Xog faahfaahsan kama helin natiijada kulamada Madaxweyne Xassan Sheekh uu la qaatay Maadxweynaha Puntland iyo Isimada. Dhanka kale,waxaa la filayaa in saacadaha soo socda ay Garowe ka bilowdaan kulamo horu-dhac ah oo u dhexeeya Madaxweynaha Dawlada Federaalka Soomaaliya iyo Madaxda Dawladaha Xubnaha ka ah Federaalka,kaasi oo horu-dhac u ah shirka maalinta bari oo Khamiis ah ka furmaya Garowe.
Wixii kaso kordhan Warkaan Dib ayaan kaso Daabacaynaa,hadduu EEBE idmo
Caaqil Maxamoud Nuux ( Sanweyne ) Oo Qurbajoogta kula taliyey lacagta looga uruursan jiray in colaad lagu huriyo, In ay ugu Deeqaan Horumarka.
K.news: Cuqaashta, wax garadka, Culimo awdiinka iyo guud ahaan shacabkii gobolka Cayn oo meel uga soo wada jeestay fidmo walayaasha ka baayac mushtara colaad hurinta iyo guud ahaan ka hortagga horumarka iyo nabada ee gobolka Cayn.
Cismaan Yuusuf oo tallo usoo jeediyey Beesha Sool Sanaag iyo Cayn, arrimo xasaasiyana ka hadlay (Video)
K.news: Cismaan Yuusuf Axmed oo kamida Qurbajoogta UK, gaar ahaan magaalada Birmingham ayaa isagoo ku hadlaya afka Jaaliyada SSC ee Birmingham usoo jeediyey tallo guud ahaan reer SSC gaar ahaana gobolka Cayn iyo dadweynaha reer Buuhoodle. Cismaan wuxuu uga digey reer Buuhoodle inaan loogu soo dhuuman magaca Dhulbahante ee sida xun loo isticmaalayo iyo maamul aan jirin, Cismaan wuxuu xusay inay dadkani yihiin kuwii cadowga gacanta u geliyey Iyagoori, Laascaanood, Xuddun, iyo Taleex maanta uu qorshoodu yahay sidii Buuhoodle gacanta loogu dhigi lahaa.
Cismaan wuxuu ka digey in Prof. Cali khaliif iyo Cabdalle Cagalule aanay dhib mooye dheef u ahayn Dhulbahante, maamulkii Dhulbahante samaystayna waa la ogaa meeshii ku dambeeyey in lagu danaystay, dhibaato, iskudir iyo dhul cadow lagu soo hogaamiyana uu horseeday.
Dhanka kale, Cismaan wuxuu u mahadnaqay issimada gobolka Cayn ee uu hogaaminayo isimka guud ee gobolka Cayn Garaad Cabdirisaaq Garaad Soofe isagoo kula dardaarmay inay nabada iyo deris wanaaga ka shaqeeyeen ninkii diidaa isagoo cirka roob ku oge! Hadalkaas oo u dhacaya beesha bariga Burco oo colaad Dhulbahante go’aansatay iyagoo ku daba gabanaya jabhadda SNM ee maamulka Somaliland isugu yeedha.